japanSamachar | मनोरन्जन/रोचक | जापानमा पूर्व शिक्षकबाट ३०० बढी पुरुष बलात्कार, यस्तो छ रोचक घटना
(Japan) 14 th April | 2021 | Wednesday | 4:35:06 PM || (Nepal) 1:20:06 PM
World 138056720 49654 2972983 1696 111086312 106113
Estonia 11508001049096844 72
Singapore 60692030060374 1
Afghanistan 5749202532052013 1124
जापानमा पूर्व शिक्षकबाट ३०० बढी पुरुष बलात्कार, यस्तो छ रोचक घटना
POSTED ON : Sunday, 14 March, 2021 | Views : 2166
ओसाका, जापान ।
सुन्दा अनौठो लाग्ने र पत्याउन मुश्किल हुने घटना पुरुषबाट पुरुष बलात्कारको हो । तर यो भन्दा अनौठो विचित्रता के भने पुरुषबाट पुरुष एक दुई जना होइन करिव ३ सयजना बलात्कारको शिकार भएका छन् ।
समाचार अनुसार यि सबै घटना निद्रा लाग्ने औषधीको गोली र सामाजिक सञ्जालको सहयोगमा गरिएको पाईएको छ ।
ओसाका प्रहरीका अनुसार बलात्कारको आरोपमा ४२ बर्षिय ताकाहिरो होजो पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका होजोको निवासबाट प्रहरीले कब्जामा लिएको फोटो अनुसार १ सय जना भन्दा धेरै पीडित भएको देखिन्छ ।
आफुमाथि लागेको आरोपको बारेमा होजोले भने कि वास्तविक संख्या १०० भन्दा बढी छ । ओसाका जिल्ला अदालतमा उनले भने पीडितको संख्या ३०० भन्दा बढी होला ।
फेब्रुवरी १८ मा अदालतले होजोलाई २० बर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । जसमा १० जना पुरुष बलात्कारको घटनामा दण्डित गरिएको हो । जुन मार्च २०१९ सम्मको अवधिमा भएका बलात्कार घटनामा हो ।
अपराधिले पीडितको चरित्र र मर्यादालाई कुल्चीएको देखिन्छ मुख्य न्यायाधीश चिवाकी माचुदाले भने 'तपाईंले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा घृणित र अपमानित छोड्नुभयो । यो स्वाभाविक हो कि उनिहरु कठोर सजाय चाहन्छन् ।'
उक्त आदेश अनुसार होजोले २० देखि ४० बर्ष उमेर समुहका पुरुषलाई निन्द्रा लाग्ने गोली खाना तथा पेय पदार्थमा मिसाएर खुवाएका थिए । पिडितहरुलाई अचेत जस्तै बनाएपछि ओसाका शहरको सुमियोशी वार्डका होटल तथा आफ्नै निवासमा यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए । किनभने उनिहरु निन्द्राको औषधी खाएपनि प्रतिकार गर्न असमर्थ बनेका थिए ।
तर न्यायाधिशले सोधेको एक प्रश्नको जवाफ दिन भने होजो असफल भए । प्रश्न यहि थियो कि 'कसरी यति धेरै अपराध गर्न सके र यति लामो समय सम्म जारी राख्न सके ?'
यसको उत्तर निद्रा लगाउने गोली र साथी बनाएर घटना गराउने गरेको देखिन्छ । जसले पीडितलाई लक्षित गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा कुरा गरेर भेट्ने गर्दथे ।
ओसाका शहरको एक सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने होजोको एक साथी अपराध घटनामा सहयोगी थिए । करीव १० बर्ष पहिले, उनले ४४ बर्षिय दाइसुके यागामिलाई भेटे, त्यस समयमा साइतामा प्रान्तका निवासी, उनिसँग डेटिगं वेवसाइटमा फेला पारेका थिए ।
लगभग दुई वर्ष पछि, यागामी अनिद्राबाट पीडित हुन पुगे । एक डाक्टरले उनलाई निद्राको गोली सिफारिस गरेपछि उनले पत्ता लगाए कि उनले अरुहरुलाई यो औषधि यौन हिंसाका लागि प्रयोग गर्न सक्छन । ओसाका प्रहरीका अनुसन्धानकर्ताले साप्ताहिक पत्रिका शुकान आसाहीलाई भनेका छन् ।
यागामीले आफुले जानेको कुराबारेमा होजोसँग बताएपछि होजोले आफुले पनि प्रयास गर्न चाहने बताए । यामागीले उनलाई १० ट्याबलेट निद्रा लाग्ने औषधिको ५००० येनको दरले पैसा लाग्ने बताए ।
धेरै समय नबित्दै, यागामी टोकियोमा सरे र उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफुलाई मन परेका रुचि अनुसारका सूटमा सजिएका युवा पुरुषहरु छान्न थाले ।
होजोले एक शिक्षकको रूपमा आफ्नो ओहदाको प्रयोग विश्वासको भावना जगाउनका लागि गरे । शिक्षण सामग्रीका लागि सूटमा सजिएका पुरुषहरू विवाह समारोहमा उपस्थित हुनेहरू जस्तै लाई फोटो खिच्न चाहेको र होजोले त्यसको लागि १०,००० येन नगद, खाना र पेय पदार्थहरु उपलब्ध गराउने सीधा सन्देशहरू लेखेर पठाउने गर्दथे ।
पीडितहरूलाई त्यसपछि होजोको निवासमा वा होटलको कोठामा बोलाईन्थ्यो । उनिहरुको विश्वास जित्न ढोका खुल्लै राख्ने, यताउती हिँड्ने र फोटो समेत खिच्दथे ।
उनीहरूले खानाको दृश्यको फोटोहरू चाहिने भन्दै उनीहरूलाई खान, पिउन लगाएर फोटोहरू लिने गर्दथे । त्यो समयमा, तिनीहरूलाई निद्राको गोली मिसाईएको खाना र पेय पदार्थ थिईन्थ्यो । एक पटक पीडित निद्रामा लठ्ठिएपछि उनिहरुमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरिन्थ्यो ।
अभियुक्त होजोले भनेका छन् 'कहिलेकाँही निद्राको औषधि चाहिंदैन थियो । रक्सीले मातिएका कार्यालयका पुरुष कामदारहरू आफ्नो निवासमा सहजै आउँथे र पछि उनिहरुमाथि यौन दुर्व्यवहार हुन्थ्यो ।'
अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले होजोको कम्प्युटरबाट भारी मात्रामा भिडियो र फोटोहरू कब्जा गरेको छ । जसले पीडितहरुमाथि यौन शोषण भएको देखाउँछ ।
प्रहरी अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन् कि पिडितहरुको उच्च संख्या बताइएपनि सन् २०१७ देखी २०१९ बिचमा भएका अपराधको मात्र अभियोग लगाईएको थियो ।
यस मुद्दामा पीडित पुरुषहरू गुनासो गर्न अगाडि आउनुपर्नेमा हिचकिचाएको पाईएको समाचारमा उल्लेख छ ।
- असाही शिम्बुन
प्रेम बिछोडपछि प्रेमिकाको चिठिपत्र भाँडोमा खाराआगे राखिदिने युवा पक्राउ
: Tuesday, 13 April, 2021
विचित्रको चोर ! महिलाको खुट्टाको बास्ना सुँघ्न जुत्ता चोर्ने पक्राउ
: Monday, 12 April, 2021
परदेशी गायकको परदेशिने नेपालीको पिडा भाव 'कलशैमा पानी' (भिडियो सहित)
: Wednesday, 07 April, 2021